रोबर्ट लुइस स्टीभेन्सन। उनको मृत्युको वार्षिकी। उनका अमर पुस्तकहरू | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
अब पूरा भयो १२123 बर्ष पछि मृत्यु भयो स्कटिश लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीभेन्सन सामोआ टापुमा। क्षयरोगले उनलाई 44 XNUMX बर्षको उमेरमा लियो, तर उनीहरु उनीहरुको जीवनशैली र धेरै उपहासका साथ बाँचे जुन उनले उपन्यासहरुमा बयान गरे। यो छ र रहनेछ सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रशंसित लेखकहरू मध्ये एक संसारको।
ट्रेजर टापु, कालो तीर, डा। जेकिल र श्री हाइडको अनौठो केस, वा मेरो कमजोरीहरू मध्ये एक जुन हो Ballantrae को प्रभु… शीर्षकहरू जुन हामी सबैले पढेका छौं वा फिल्म अनुकूलनहरूमा देखेका छौं, उनीहरूका कथाहरू र कथाहरू पहिल्यै अमर छन्। म तिनीहरू मध्ये केहीलाई एंग्लो-स्याक्सन संसारमा सम्भवत सबैभन्दा प्रतिष्ठित साहसिक लेखकको लागि विनम्र श्रद्धांजलिको रूपमा समीक्षा गर्दछु।
1 खजाना टापु
2 स्कटिश कथाहरू
3 कालो मा मान्छे
4 कालो तीर
5 डा। जेकिल र श्री हाइडको अनौठो केस
6 बोतल र अन्य कथाहरूमा शैतान
7 Ballantrae को प्रभु
१ London1883 मा लन्डनमा प्रकाशित भयो। ल Long्ग जोन सिल्भर, जिम हकिन्स, क्याप्टेन फ्लिन्ट, बिली बोन, ब्ल्याक डग, बेन गन, नाइट ट्रेलानी, क्याप्टन स्मोलेट हिस्पानियोला... नामहरू हाम्रो पठन मेमोरीमा सँधै स्थिर भयो। यस उपन्यासको मेरो पहिलो सम्झनाहरुमा, यसको एउटा टुक्रा, बेन गनसँगको वार्तालाप पढेको, जुन स्कूलमा हामीलाई दिइएका केहि मनोवैज्ञानिक परीक्षणहरूको लागि पढ्ने बुझ्ने परीक्षामा थियो।
पछि अरू धेरैले यो पढेर मसँग सामेल हुन्छन् बच्चा, वयस्क, अंग्रेजी संस्करण, र धेरै अनुकूलन वा कार्टुनमा यो देखीएको छ। यसको सेटिं Myमा मेरो नजिकको दृष्टिकोण, एक ग्रीष्मकालीन ब्रिस्टलमा मैले बिताएको चार हप्ता मैले सराय कहाँ भएको होला भनेर अनुमान गर्ने प्रयास गरें। एडमिरल बेन्बो o स्पाइग्लास, जोन सिल्भरको टुभर्न। अनन्त साहसिक कथा।
स्कटल्याण्डमा सेट गरिएका पाँच कथाहरू यस खण्डमा सँगै ल्याइएको छ।
शरीर चोर विज्ञानको रूपमा अनातोमीको विकासको दिनहरूमा केन्द्रित छ, जब कक्षा कोठामा लाशहरूको आवश्यकता पर्दछ, र बेईमान अपराधीहरूले कब्रिस्तानहरू लुट्छन्।
कुटिल जेनेट यो बोक्सीविद्या र कब्जाको कथा हो, र उत्पीडनको कुरा बताउँदछ जुन स्कटिश शहरको एक कडा पादरी पुजारीलाई अधीनमा राखिएको छ, पुरानो अन्धविश्वासमा लंगरिएको छ।
En आनन्दित पुरुषहरू कार्य स्कटल्याण्डको उत्तरी तटमा सेट गरिएको छ, र हामीलाई एक जहाज बिग्रिएको स्पेनिश ग्यालियनको खजानाको खोजी बताउँछ।
प्लेग तहखाने यसले हामीलाई एक तहखानामा लग्यो जहाँ एक अज्ञात प्रकृतिको दुष्ट बस्दछ।
लिंकको मंडप इटालियन कार्बोनरीले पीछा गरेको एक व्यापारी जसले उनीबाट ठूलो रकम माग्दछ, जहाँ उनी घेरा हालेर एउटा हवेलीमा शरण लिन्छन्।
कालो मा मान्छे
यो छोटो कथा उसको उत्कृष्ट कृति मानिन्छ, तर यो अनुवाद गर्न कठिनाईको कारणले थोरै थाहा छ किनकि यो स्कटिश भाषामा लेखिएको छ। त्यो ग्रामीण वातावरणको साथ धेरै अन्धकार छ कि स्टिभनसनलाई राम्ररी थाँहा थियो र ती घृणित व्यक्तिहरू कहाँ बनेका थिए बोक्सी परीक्षणहरू.
यो मूल रूपमा प्रकाशित भएको थियो बुलेटिनको रूपमा १ 1883 throughout मा सेट गर्नुहोस् मध्यकालीन इंग्लैंड समयमा लिन्छ दुई गुलाब को युद्ध जसले देशको मुकुटको लागि ल्यानकास्टर र यर्कको घरहरू बनायो। कथा बताउँछ डिक शेल्टन, जसले आफ्नो बुबाको हत्याराहरू भागे पछि अपहरणकर्ताहरूको बीचमा शरण लिन्छन् कालो तीरको कम्पनी, जसले उसलाई बदला लिन सहयोग गर्दछ।
डा। जेकिल र श्री हाइडको अनौठो केस
यो छोटो उपन्यास उनको अर्को महान काम हो र जहाँ स्टीभन्सनले एउटा विषयलाई व्यवहार गर्‍यो जुन उनको जीवनभर उनको व्याकुल बनायो: मानव प्रकृति को द्वैद्व। उसले उसको मुटुमा राख्यो भिक्टोरियन लन्डन र यो विभिन्न साक्षीहरूको साक्षीहरूको शृ .्खला हो जसको उद्देश्य रहस्य खोल्नु हो। Jekyll र हाइड दुई मा एक अलग अलग इकाई हो। हाइड जेकिलको राक्षसी व्यक्तित्व हो र यसले आत्म-दमन गर्ने दुष्टको प्रतीक हो, जुन एकपटक रिहा भएपछि उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। र मेरो लागि जेकिल र हाइडसँग पहिले नै सिनेमाको त्यो राक्षसको अनुहार थियो स्पेन्सर ट्रेसी.
बोतल र अन्य कथाहरूमा शैतान
यो संकलन पाँच कथाहरू पनि समावेश छ शरीर snatchers; मार्कहेम, que यो राम्रो र नराम्रो बीचको संघर्षको मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो; ओल्लाला यो पृष्ठभूमिमा लीकानथ्रोपीको विषयवस्तु भएको रोमान्टिक कथा हो; Falesá समुद्र तट यो एक साहसिक कथा हो जुन ईन्ट्रोस्पेक्टिव लुकको साथ र बोतलमा शैतान दक्षिण समुद्रहरुमा एक कल्पित कल्पित कथा बनाउँदछ।
Ballantrae को प्रभु
सबैभन्दा चम्किला पुस्तकहरु। उनले १ 1887 मा यो संयुक्त राज्य र क्यानाडाको सिमानामा रहेको शहरमा लेख्न शुरू गरे र दुई वर्ष पछि दक्षिण समुद्री तटमा रहेको सनी टापु वाइकीकीमा समाप्त गरे। स्टीभेन्सनको यात्रा जीवनबाट प्रभावित उपन्यास, विभिन्न सेटिंग्स, परिदृश्य, वर्ष र देशहरूमा फराकिलो छ।
भगवान दुर्रिसिडरका दुई छोराको कथा, गन्तव्य, राजनीति र प्रेम सामना गर्नेहरूका लागि यसको सबैभन्दा प्रसिद्ध फिल्म अनुकूलन थियो १ 1953 XNUMX को फिल्ममा एरोल फ्लाइन स्टार गर्दै, ठूलो स्क्रीन का सबै भन्दा राम्रो रोमांच का एक मिथक।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » रोबर्ट लुइस स्टीभेन्सन। उनको मृत्युको वार्षिकी। उनका अमर पुस्तकहरू
"स्टार वार्स एंथोलोजी" प्लानेट क्यामिक द्वारा सीमित संस्करण